Kedu akwụkwọ-ụta pụtara? Lee nkọwa na Financial Lexicon
Malite mgbazinye ego Wiki Encumbrance
Kedu ihe bụ akwụkwọ kpatara nsogbu ala?
Okwu ahụ Encumbrance ị ga-enwe mmasị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'inweta ala ma ọ bụ ego ego. Onyinye a dị mkpa bụ naanị n'ime aha ala na Ụlọikpe District, bụ nke a na-eji gosi ego ịgbazinye ego. Ị ga-achọ ịma ihe ọ gbasara na okwu a n'ihe gbasara ego mgbazinye ego. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka ọrụ maka iwu ma ọ bụ ịzụta ihe onwunwe ma ị nweghị ego zuru ezu ịzụta ya, ị ga-enwe ike ile ego anya site na ego ma ọ bụ ego mgbago. Iji chekwaa ego a, ụlọ akụ ahụ ga-abanye ụgwọ ụgwọ aha ala na ntinye aha ntinye nke ala nke III nke ala ndekọ dịka ego nke ego ahụ dị.
E jikọtara nchedo okwu ahụ bụ "nnyefe"
Ha onwe ha ga-amara na nchedo nchebe na ntụkwasị obi nwere njikọ chiri anya na akwụmụgwọ na mgbazinye ego. Maka nchekwa, otu ụlọ akụ na-eburu ya ego ọ na-enye mgbe ọ na-azụ ma ọ bụ na-ewu ihe onwunwe n'ime ndekọ ala. A pụkwara ịbanye n'ụgwọ ndị ọzọ ebe a ma ego nke mgbazinye ego ahụ ga-agbanye ego ịgba ụgwọ. Ị ga-achọ ịma na ụlọ akụ nwere akwụkwọ-ịkwụ ụgwọ ụgwọ ruo na njedebe nke 80% nke uru nke ihe onwunwe ahụ. Ha onwe ha nwere ike ime ntinye a, ụlọ akụ ahụ nwere ike ime nke ahụ, na ụlọ akụ nwere ike ịchekwa ụgwọ ndị ọzọ site na nnyefe. Ọ bụghị naanị na ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ ha mgbazinye ego na mgbazinye ego, kamakwa na ndekọ ala nwere ike ịdenye aha dị ka akwụkwọ nnyefe nakwa ndị ọzọ na-ekwu, nke na-abụghị ego. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere ihe nketa ma ọ bụ na e guzobere obodo na-elekọta ndị nọnye, akwụkwọ na-akwụkarị ụgwọ ụgwọ ala na ndekọ aha ala. Naanị ndị nwere ikikere nwere mmasị na ihe onwunwe ma ọ bụ ndị nọ na mgbazinye ego nwere ike ịlele nkwụnye ego.
Ntinye nke akwụkwọ ahụ ụgwọ ụgwọ ala
Ntinye na ndekọ ala ka ọ bụrụ ala ma ọ bụ ụlọ, enweghị ike ịme mmadụ niile ngwa ngwa. Ndebanye aha nke ala ahụ, bụ nke dị na ụlọikpe gọọmenti mara mma, na-edebanye aha ya n'ezie. A na-edebe ihe onwunwe ma ọ bụ ihe onwunwe na mpaghara ikpe ụlọ a ebe a ederela ala ọ bụla na ntinye aha ntinye. Enweghị mgbakwasị ụkwụ. Maka nghọta na nkowa ọzọ, a ka nwere echiche nke Letter mortgage, Otú ọ dị, e nwere ụdị ụgwọ dị iche iche, dịka akwụkwọ ndekọ ego-ịgbaziri agbazinye, nke onye nwe ụlọ ma ọ bụ ihe onwunwe jụrụ ikike iji dozie ihe ahụ a rịọrọ ya. N'ọnọdụ nke ịkwụ ụgwọ na ịkwụsị ịkwụ ụgwọ, onye nbinye ego enwetaworị ikike nke ihe onwunwe ma ọ bụ ala. Ọnọdụ a dị iche na nkwụnye ego nke akwụkwọ ozi, ebe ọ bụ nanị ego a na-akpọ ego, ma ọ bụghị ịnyefe ihe onwunwe. Ndenye nke ụgwọ akwụkwọ dị mkpa kwesiri ịkwụ ụgwọ ma na-abụkarị onye nwe ụlọ na-akwụ ụgwọ ndị a. N'oge mgbaaka, akwụkwọ a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ taa - a pụkwara ilebanye anya na ntinye akwụkwọ na ndekọ ụlọ ọrụ ndị a nwere ọbụna ndị ọha na eze. Iji mee ka ị mara kpọmkwem okwu ahụ, ị ​​ga-ama ọnụọgụgụ ahụ, ụlọ ọrụ akwụmụgwọ ahụ agbachitere megide otuto nke akwụmụgwọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị nweta ihe onwunwe ma ọ bụ ihe onwunwe site n'enyemaka nke ego, mgbe ahụ ụlọ akụ ga-edeba aha nnyefe ego a kwekọrọ na ndekọ ala. Ị na-eburu ụgwọ nke ndebanye aha a ma ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ahụ n'ụbọchị, ị ga-etinye akwụkwọ maka nkwụsịtụ ahụ ma ụlọ akụ ahụ ga-enye gị ikike nhichapụ. Ọzọ, ụgwọ maka nhichapụ na ụdị ụgwọ na-abịakwute gị.
Isiokwu bu nke annochianya uru
Isiokwu ọzọAtọ ụzọ ego